चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी जानकारी
शुल्क, जरीवाना के–कति लाग्छ ?
चालक अनुमतिपत्रको म्याद नाघेको ३ महीनाभित्र चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराइसक्नुपर्छ । यस्तो नवीकरण ५ वर्षका लागि कायम रहनेछ । नवीकरण गर्न सवारीचालक स्वयम् उपस्थित भई नियमानुसार दस्तुर बुझाएको भौचरसहित रू. ५ को टिकट टाँसी दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
यसरी दरखास्त दिँदा सवारीचालकले नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट प्राप्त निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आउने निवेदकहरूबाट नियमानुसार लाग्ने दस्तुरसहितको निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतद्वारा निवेदन दर्ताका लागि सम्बन्धित फाँटमा पठाइनेछ । सम्बन्धित फाँटवालाले निवेदन दर्ता गरी निवेदकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने मिति तोकी पठाइन्छ ।
दर्ता निवेदनहरू आफ्नो कार्यालयबाटै जारी भएको चालक अनुमतिपत्रको हकमा ७ दिनभित्र र अन्य अञ्चलबाट जारी भएको चालक अनुमतिपत्रको हकमा १५ दिनभित्र नियमानुसार कार्यालयमा राख्नुपर्ने रेकर्ड राखी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पठाइनेछ । ५ वर्षसम्म पनि नवीकरण नगराएको चालक अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिनेछैन । यसरी नवीकरण नभएको अनुमतिपत्रको लगत दर्ता किताबबाट कट्टा गरिनेछ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरबापत ठूला सवारीका लागि रू. २ हजार र मझौला सवारीका लागि रू. १ हजार ५ सय लाग्छ । त्यस्तै, मोटरसाइकल, स्कूटरबाहेकका साना सवारीका लागि रू. १ हजार र मोटरसाइकल, स्कूटरका लागि रू. ७ सय लाग्छ । तर, एउटै चालक अनुमतिपत्रमा एकभन्दा बढी किसिमका सवारी चलाउने इजाजत पाएका हकमा सबैभन्दा बढी दस्तुर लाग्ने सवारीको दस्तुर मात्र लाग्नेछ । चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिले ३ महीनाभित्र पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा सो मिति समाप्त भएको १ वर्षसम्म १ हजार ५, २ वर्षसम्म २ हजार ५, ३ वर्षसम्म ३ हजार ५, ४ वर्षसम्म ४ हजार ५ र ५ वर्षसम्म ५ हजार ५ थप जरीवाना र दस्तुरसमेत लिई यस्तो चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनेछ ।
चालक अनुमतिपत्रमा कारबाही र खारेजी के कसरी हुन्छ ?
शुरूमा प्रदान गरिने चालक अनुमतिपत्र एकवर्षे परीक्षण अवधिका लागि प्रदान गरिनेछ । परीक्षण अवधिमा ऐन, नियमावलीविपरीत कार्य पाँच पटकभन्दा बढी पटक गरेको प्रमाणित भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी रद्द नभएको अवस्थामा उक्त अनुमतिपत्र स्वतः स्थायी भएको मानिनेछ ।
चालक अनुमतिपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत सवारी चालकले सवारी चलाएको पाइएमा त्यस्ता सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले पहिलोपटक ३ महीनाका लागि निलम्बन गर्न दोस्रोपटक ६ महीनासम्मका लागि निलम्बन र तेस्रोपटक भए खारेजसमेत गर्नेगरी निर्णय गर्न सक्नेछ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अयोग्य भएको प्रमाणित भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनुमतिपत्र खारेज गरी सो अनुमतिपत्र फिर्ता बुझाउन चालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र चालकले आफ्नोे अनुमतिपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ ।
५ वर्षम्म पनि नवीकरण नगराएको चालक अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिनेछैन । यसरी नवीकरण नभएको अनुमतिपत्रको लगत दर्ता किताबबाट कट्टा गरिनेछ ।